Stefan Molyneux အင်တာဗျူး Gary Wilson - Your Brain On Porn
မှတ်ချက်: Molyneux ရဲ့နိုင်ငံရေးကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသူနဲ့အင်တာဗျူးဖို့သူတောင်းဆိုတဲ့အခါငါလည်းမသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်သူ့ကိုစုံစမ်းခဲ့တယ်၊ သူကလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့အမြင်ကိုဘာမှမရှာနိုင်ခဲ့ဘူး။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာမင်းကြားနိုင်တဲ့အတိုင်း၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါရာနှင့်ချီအင်တာဗျူးများနှင့် Podcast တခုကိုပွုပါပွီ။ အလားအလာရှိသောအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖော်ပြသောခြေဆွံ့သောအတွေးအခေါ်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာရမည်နည်း (သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်အင်တာဗျူးသူကမည်သို့ဆိုမည်နည်း)
ထိုအချိန်မှစ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက် RealYBOP twitter (ပြေး ချီးမွမ်းနှင့်ဒံယလေက Burgess) နှင့်အများအပြား RealYBOP အဖွဲ့ဝင်များMolyneux သည်ဖြူစင်သောအစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ပြသမှုအပေါ်ကျွန်ုပ်၏အသွင်အပြင်ကိုဆိုလိုသည်။ ငါရယ် အဖြူ supremacist ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရအောင် - ငါ့ရဲ့အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေနဲ့ဆိုက်ဘာသမားတွေ၊ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley, ဒီအစပျိုးသူမြားဖြစ်ကြသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော smear မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အဲဒါကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့သူတွေပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် Molyneux ရဲ့ အမြင်များ, ကအကြံပြုဖို့, သင်တန်း, စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် သူ၏ အမြင်များသမျှသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြသည်။ ဂျိုးရိုဂန်ယခုသူသည်အဖြူ supremacist လား ပုံမှန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည် Stefan Molyneux သည်သူ၏ podcast သို့သွားမည်လော
ငါနဲ့မတူတာက Joe Rogan ဟာ Molyneux ရဲ့အမြင်ကိုကောင်းကောင်းသိခဲ့တယ်။ ငါသာတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ဧည့်သည် Molyneux ၏ podcast တွင်အင်တာနက် porn (နှင့်အခြားဘာမျှမ) ကိုဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရား - ငါတကယ်လက်ဝဲလစ်ဘရယ်ဖြစ်ပြီးအဖြူ supremacist ကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်တယ်။ ထိုသို့သောအမြင်များကိုကျွန်ုပ်ရွံရှာ။ ရှုတ်ချသည်။ ကျွန်ုပ်၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုလူမည်းများနေထိုင်ရာနေရာတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဆွေမျိုးနှစ် ဦး သည်အာဖရိကန်အမေရိကန်များနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်အမှန်တရား၏မှတ်တမ်းအတွက်ဤအင်တာဗျူးကိုနားထောင်ပါ။ porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers (Wilson ကအတူအင်တာဗျူး).
စာမျက်နှာ ၁၃၀၀၀ ပါ ၀ င်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှဤအင်တာဗျူးကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်မဖျက်သိမ်းရကြောင်းထောက်ခံသူများစွာကသိလိုကြသည်။ အဖြေကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့အနှောင့်အယှက်ပေးသူတွေပေါ့ နီကိုးလ် Prause နှင့် Twitter ပေါ်တွင် RealYBOP မှားယွင်းစွာအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့ကြဂယ်ရီ Wilson သည် Molyneux Podcast ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားနေသည်တကယ်တော့ငါကအဲဒါကိုဖုံးကွယ်မမြှင့်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာငါလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါဇင်ပေါင်းများစွာထဲကနောက်ထပ် Podcast တစ်ခုပဲ။ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကိုလုံးဝမဆွေးနွေးပါဘူး၊ နားထောင်သူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြားပြီးအမှန်တရားကိုတရားစီရင်နိုင်စေချင်တယ်။
အခြားသူများကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (ထို့နောက်“ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဖြင့်အပြစ်ရှိသည်” ကိုတည်ထောင်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း) သည်ညစ်ညမ်းသောအချေအတင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်မပါဝင်နိုင်သူများ၏အကြိုက်ဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ငါနှင့်အခြားတိုက်ခိုက်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာ၏ဤကဏ္documentများကိုကြည့်ပါ။
၂၀၁၉ သြဂုတ်၊ massဂုတ်လ ၂ ရက် (El Paso & Dayton) အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုအပြီးတွင်နီကိုးလ် Prause နှင့် David Ley တို့သည်ဂယ်ရီ Wilson၊ YBOP နှင့် Nofap / Alexander Rhodes ကိုအဖြူရောင်အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့်နာဇီတို့၏ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ကြိုးစားသည်
နောက်ဆုံးအဆင့် # 1: နောက်ဆုံးတွင် Prause ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုတို့ကသူမနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ On မေလ 8, 2019 Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (အလားတူနှောင့်ယှက်၏ 1 သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (2) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (3) မှားယွင်းသောဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်များနှင့် (9) ကျမ်းကျိန်လွှာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad။ ) တွင် အောက်တိုဘာလ 23, 2019 အလက်ဇန်းဒါး Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) ကတင်သွင်းခဲ့သည် Nicole R Prause နှင့် Liberos LLC တို့အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း.
update ကို #2(နိုဝင်ဘာလ, 2019): နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိကျသောမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှု - “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။
Megan Fox ရဲ့ Prause ရဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောက်နုတ်ချက်ကတော့ငါ၊ အဲလက်စ်နဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သူတိုင်းကအဖြူရောင် supremacist တစ်ယောက်ပါ။
ရေးသားသူဒိုင်ယာနာဒေးဗစ်ဆန် The Post Millennial နီကိုးလ် Prause အပေါ် '' ဖော်ထုတ်ထို့အပြင်ဒီထုတ်လုပ်ခဲ့သည်6မိနစ်တွင်ဗီဒီယို Prause ရဲ့အတုသားကောင် - ပါးပျဉ်းနှင့် Prause ဆန့်ကျင်တင်သွင်းအသရေဖျက်မှုတရားစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်။ ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော t သည်ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြပေးနေပါသည်သူ Diana Davison ဗီဒီယို (စွဲလမ်းမှုဝေဖန်သူနှင့် Prause ပန်ကာအားတုံ့ပြန်မှု)
လိမ်လည်မှုအဖြစ်ထိတွေ့ချီးမွမ်းခြင်း။ ဒီမှာအများကြီးပို: နီကိုးလ်ပရူးဇ်နှင့်ဒေးဗစ်လီတို့သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း (စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၉၉) တွင်မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့သည်။
အပ်ဒိတ်နံပါတ် (၃၊ ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်များအရနီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကို SLAPP ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
UPDATE - Molyneux ၏ Youtube ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည် ငါနဲ့အတူ podcast.
ငါ (နေဆဲနောက်ခံ Podcast တခုကိုပေး ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Prause ၏လိမ်လည်မှုများကိုတန်ပြန်ရန်။